INkosana Autopsy: Inqanaba eliphezulu kakhulu leFentanyl emzimbeni - Umculo
Eyona Umculo INkosana yayinenqanaba eliphezulu kakhulu leFentanyl kwiQumrhu xa yafa
INkosana yayinenqanaba eliphezulu kakhulu leFentanyl kwiQumrhu xa yafa
Umculi weNkosana wenza iqonga.Ifoto nguKristian Dowling / Getty Izithombe
Ngo-Epreli ka-2016, i-icon yomculo iNkosana yasweleka ineminyaka engama-57. Wafunyanwa eswelekile kwisinyusi kwisakhiwo sakhe iPaisley Park kulandela ukugqithisa ngengozi i-fentanyl. Iinkcukacha ezithile zokusweleka kwakhe bezimbalwa kwaye bezikude ukusukela oko, kodwa ingxelo eyimfihlo yobutyhefu efunyenwe yi-AP ityhile okuninzi ngokusweleka kwakhe.
Inani elisegazini lakhe liphezulu kakhulu, nokuba umntu onesifo esinganyangekiyo kwiifentanyl patches, uGqirha Lewis Nelson, usihlalo wamayeza kaxakeka eRutgers New Jersey Medical School ongadibananga nophando, uxelele i-AP (nge USA Namhlanje ).
Uyichazile ingxelo, eqaphele uxinaniso lwefentanyl egazini likaPrince yayiyi-67.8 micrograms kwilitha nganye, umpu ocacileyo ocacileyo. Ukusweleka kwangaphambili okunxulumene nefentanyl kubandakanya ukugxila phakathi kweemitha ezintathu ukuya kwezingama-58 ilitha nganye.
Ingxelo ikwatsho ukuba isibindi sikaPrince sasinee-micrograms ezingama-450 ngekhilogram yeziyobisi. UNelson uqaphele ukuba ubungakanani obungaphezulu kwama-micrograms angama-69 ngekhilogram kubonakala ngathi bubonisa ukudlula ngokweqile okanye iimeko ezinobungozi obubulalayo.
I-Fentanyl iphambili kwintlekele ye-opioid yaseMelika njengoko ichiza linamaxesha angama-50 anamandla kune-heroin. Ukuphathwa gadalala ngokuzonwabisa kwefentanyl kuqala phakathi kwiminyaka yee-1970. Ukusukela ngoko, i-fentanyl eyenziwe ngokungekho semthethweni, ihlala ixutywe nezinye iziyobisi, iye yaxhaphaka phakathi kokuthengisa iziyobisi ngokungekho mthethweni.
Ngenxa yokunyamezelana okungafaniyo kwento, akukho sixa sibekiweyo abanokuthi salatha kuso oogqirha njengomda wokudlula. Nangona kunjalo, iingcali ziqaphele ukuba inkqubo yePrince iqulethe isixa esinokubulala.
Umtshutshisi ophambili kwityala likaPrince uthe kwiveki ephelileyo ukuba isigqibo siyakuthatyathwa ngokubhekisele kwizityholo ezinokubakho kungekudala.
UGoogle ufumanise iTrack yokuSusa iiFoto zamanzi eziValiweyo-emva koko uchaze indlela yokuMisa
Beka kuvavanyo: I-Samsung Galaxy S8 + kunye ne-Apple iPhone 7 Plus
Abafana 'beenkukhu zerobhothi' baveza iimfihlo kwimpumelelo yabo yeminyaka eli-15
'Amanga Amakhulu Amakhulu' Ukuphindaphinda 1 × 04: Nabani na uTata angaba nguDarth Vader
ibhokisi yokuqala yokucoca iofisi
Ungazifumana njani iisampulu kwi-sephora
ukuthandana free sites abadala
I-rick kunye ne-morty kwi-hulu
billy graham umhla wokufa
abaphindezeli ibhokisi yemfazwe engapheliyo kuqikelelo